Proform Power 995c Treadmill $ 999 ne Free Shipping - Fitness Rebates
musha » Amazon » Proform Power 995c Treadmill $ 999 ne Free Shipping
Kukwidziridzwa Kwemitero Kunopa Proform Treadmill Deal kubva Amazon
Tenga iyo Proform Simba 995c Treadmill ye $ 999 chete nekutakura KWEMAHARA
Sevha $ 1000 Bvisa Yekutanga Yekutengesa Mutengo we $ 1999
The ProForm Power 995c yakarongwa se "Best Buy" kubva kuTreadmill Doctor. Iyo ine 3.0 CHP Mach Z yekutengesa pamwe nemotokari. Iyo ine 0-12 MPH yekumhanyisa kutonga, 0-15% inorerekera, uye inoenderana neyakaisarudzika Ifit Live chishongedzo
Nezve Ifit Live:
iFit Technology inodzosera chiitiko chako chekutsika-tsika nekutevera online online, kurovedzwa kunofambiswa neGoogle Mepu, kudzidziswa kwechiitiko, kurovedzwa kwevhidhiyo, uye zvimwe. Simba 995c Inoda iFit Wi-Fi Module iyo inotengeswa zvakasiyana. Wireless home network inofanirwa kubatanidza kuIFit yako profile. * Google neGoogle Maps zviratidzo zvekutengeserana zvakanyorwa zveGoogle, Inc. *
Iyo Proform Simba 995c's treadmill bhandi inoyera 20 x x 60 ″. Iyo Power 995c ine makumi matatu yakavakirwa mumapurogiramu ekurovedza muviri kuitira kuti uve nemhando dzakasiyana siyana dzekurovedza kusarudza kubva. Iyo saver yenzvimbo iyo inopeta kumusoro nyore kuti ichengeterwe. Iyo ine inonakidza yakapfava yekusimudza system zvakare iyo inoisa kushoma kushushikana kumusana kwako kana iwe uchifanira kuipeta. Iyo Power 30c yekutsika ine 995 lb huremu huremo.
Warranty paProform Power 995c treadmill ndeye makore matatu zvikamu uye gore rimwe pabasa.
Kutenga ProForm Power yako 995c Treadmill Nhasi kubva kuAmazon
* Mutengo we $ 999.99 weProform Power 995c Treadmill Inoshanda kubva pa2 / 10/14 11: 41 PM EST. Zvigadzirwa zvemitengo uye kuwanikwa kwakarurama kunge kwezuva / nguva yakaratidzwa uye inogona kuchinja. Chero chero mutengo uye ruzivo rwekuwanika rwakaratidzwa paAmazon.com panguva yekutenga ichashanda pakutenga kwechigadzirwa ichi
Saina Chikumbiro cheGaiam Email Rondedzero & Tora 15% YAKANAKA!